Izicelo ezahlukahlukene ze-50 ohm & 70 ohm Coaxial Cables - Connexions Technology (Dong Guan) Ltd.
Izicelo ezahlukahlukene ze-50 ohm& 70 ohmIkhebula le-Coaxials
The Connexions Technology specializes in manufacturing of all kinds of Ikhebula le-Coaxials.
Vumela’s learn together about different applications for 50 ohm& 70 ohmIkhebula le-Coaxials.
1.Yisiphi isimo esifanele i-50 ohmIkhebula le-Coaxial?
Inhloso enkulu ye-50-ohmIkhebula le-Coaxialukudlulisa amasiginali wedatha ngendlela yokuxhumana enezindlela ezimbili. Izibonelo zohlelo lokusebenza ezijwayelekile zifaka phakathi: intambo yomgogodla lapho amakhompyutha akhaI-Ethernet, ama-feeder antenna wenethiwekhi engenantambo, iziphakeli ze-GPS antenna, kanye nezinhlelo zomakhalekhukhwini. Imikhiqizo yenhlangano yekhebula ebhalwe kulesi sigaba ikhava uchungechunge lwe-RG olusetshenziswa kakhuluIkhebula le-Coaxialsnezindawo zokuxhuma zezinhlelo zokusebenza ezingenhla.
2.Yisiphi isimo esifanele i-50 ohmIkhebula le-Coaxial?
Inhloso enkulu yama-75 ohmIkhebula le-Coaxialukudlulisa amasignali evidiyo. Isicelo esivamile ukuhambisa amasiginali we-TV TV, ngakho-ke kwesinye isikhathi ibizwa nge- "signal feeder" futhi imvamisa ifakwe isixhumi sohlobo lwe-F. Olunye uhlelo lokusebenza olujwayelekile lunjengokudluliswa kwesiginali yevidiyoIkhebulaokokusebenza kokudlala, njengeUkudlala kwe-DVDIkhebula,okuvame ukufakelwa i-Izixhumi ze-BNC ne-RCA. Kulezi zibonelo ezimbili ezingenhla, RG59 futhi RG6 Ikhebula le-Coaxials zisetshenziswa kabanzi.Imikhiqizo yenhlangano yekhebula efakwe kuhlu kulesi sigaba ifaka yonke imininingwane ejwayelekile efanelekile kulezi zinhlelo zokusebenza ezimbili.
Contact us for more details futhi inquiries now.